Le ndlu iquka: igumbi lokulala eliphindwe kabini elineembono zepanoramic phezu kweTrasimeno Lake kunye nebhedi yesofa yomntu omnye, igumbi lokuhlala elinekhitshi elixhotyiswe, indawo yomlilo kunye nebhedi yesofa kwaye ekugqibeleni, igumbi lokuhlambela elibanzi elineshawari eyahlukileyo kunye nebhafu. Isitayela singqongqo ngokungqongqo, kungenxa yoko, ukulungiswa kwenziwa ngokuhlonipha ngokupheleleyo isitayela sokuqala. Ngaphandle, kukho igadi eqhelekileyo, indawo yokudlala yabantwana, isitiya semifuno esine-synergic kunye nepatio yasebusika.
Indlu ikumgangatho ophezulu wendlu kunye nokufikelela okwahlukileyo. Indawo yangaphandle yabelwana ngayo nabanini abahlala kumgangatho ophantsi, kukho izilwanyana ezininzi egadini, kukho indawo yokuqubha (5x10mt) kwaye ukuba ufuna ukonwabela imveliso yegadi okanye ukonwabela ipatio ebusika kufuneka ubuze nje. kubanini.
Siya konwaba ukucebisa iindlela ezihamba phambili zokuhamba, iindawo zokundwendwela, ukutya kwasekhaya, kwaye ngokukodwa isitayile sokwenyani sase-Italiya! Nanini na xa kusenzeka siya kuba sisixhobo sakho kuyo nayiphi na imfuno.